(သြကာသ ကန်တော့ခန်းရှင်းလင်းချက်) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာန သို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန်
All ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာန Pages
သြကာသ ။ ။ အခွင့်၊ ခွင့်ပြုတော်မူပါ။ (ရှိခိုးခွင့် ပြုတော်မူပါ။ ကန်တော့ခွင့်ပြုတော်မူပါဟု ခွင့်တောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုသေမှုကို အလေးအနက်ပြုလိုသောကြောင့် သြကာသ ကို သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုကြရသည်။)
ကာယကံ ။ ။ ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်သောအမှု
၀စီကံ ။ ။ နှုတ်ဖြင့် ပြောဆိုသောအမှု
မနောကံ ။ ။ စိတ်ဖြင့် ကြံစည်သောအမှု
သဗ္ဗဒေါသ ။ ။ သဗ္ဗ+ဒေါသ=ခပ်သိမ်းသော+အပြစ်
ခပ်သိမ်းသော အပြစ်တို့ကို ။ ။ သဗ္ဗဒေါသဟူသော ပါဠိစကားကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆို၍ လေးနက်စေရန် ထပ်မံဆိုခြင်းဖြစ်သည် ။
ပျောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ။ ။ ရတနာသုံးပါးနှင့် မိဘဆရာသမားများအပေါ်၌ ကိုယ်အမူအရာဖြင့် ပြစ်မှားခြင်း၊ အပြောအဆို (နှုတ်) ဖြင့် ပြစ်မှားခြင်း၊ စိတ်ကူး အကြံအစည်ဖြင့် ပြစ်မှားခြင်းတို့တွင် တစုံတခုသော ပြစ်မှားခြင်း ရှိခဲ့သော် ထိုအပြစ်တို့ကို ပပျောက်လျော့ပါး သွားစေရန် တောင်းပန်ဝန်ချကန်တော့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်မြောက်အောင် ။ ။ ပါဠိနှင့်မြန်မာတွဲဖက်သုံးနှုန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနက်အဓိပ္ပာယ် အထူးရှင်းရန်မ လိုပါ။
ရတနာ ။ ။ အလေးအမြတ်ပြုထိုက်ခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးမားခြင်း၊ ရှားပါး၍ ရခဲခြင်း၊ ရရှိသူ တွေ့ရှိသူအား နှစ်သက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ရတနာဟု ခေါ်ဆိုရသည်။
ဘုရား ။ ။ အလုံးစုံကို အကုန်အမြင် သိမြင်တော်မူသောကြောင့် ဘုရားဟုခေါ်ပါသည်။
တရား ။ ။ သတ္တ၀ါများကို ဆင်းရဲတွင်းသို့မကျရအောင် ဆောင်ယူတတ်သောကြောင့် တရားဟုခေါ်ပါသည်။
သံဃာ ။ ။ အယူသီလ တူမျှသော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းနှင့် သမ္မုတိ သံဃာကို သံဃာဟုခေါ်ပါသည်။
ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကို ။ ။ မြင့်မြတ်သော ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ တို့ကို
အရိုအသေ ။ ။ ၀ပ်တွားကျိုးနွံခြင်း၊ မလေးမခန့်မပြုဘဲ ကြောက်ရွံ့ခန့်ညားမှုကို ဖော်ပြခြင်း၊
အလေးအမြတ် ။ ။ လေးစားခြင်း၊ မြတ်နိုးခြင်း။
လက်အုပ်မိုး၍ ။ ။ လက်ဝါးနှစ်ဘက်ကို စုံညီပြု၍ နဖူးအထိ ချီမြှောက်ထားခြင်း၊
(ဘုရားရှိခိုးရာ၌ လက်အုပ်ကို မေးစေ့ (သို့) ရင်ညွှန့်မျှသာ မြှောက်ချီထားခြင်းသည် အမြင့်ဆုံးအရိုအသေပြုနည်းမဟုတ်၊ နဖူးအထိ မြှောက်ချီထားမှသာလျှင် အမြင့်ဆုံး အရိုအသေပြုခြင်း ဖြစ်သည်။)
ရှိခိုးပူဇော် ။ ။ ရှိခိုးခြင်းကိုပင် ပူဇော်ခြင်း ဟုဆိုလိုသည်။
ဖူးမြော် ။ ။ မြင်တွေ့ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ညာဏ်မျက်စိ၌ ထင်ရှားပေါ်လွင် လာအောင် အာရုံပြုခြင်း
မာန်လျှော့ ။ ။ ရှိခိုးခြင်း၊ ကန်တော့ခြင်းကို ပြုရာ၌ မာန်မာနကို လျှော့ချပြီးမှသာ ရှိခိုးကန်တော့နိုင်သည်။ (မိမိကိုယ်ကို ရတနာသုံးပါးအောက် နိမ့်ကျသည်၊ ညံ့သည်ဟု ယူဆပါမှ ရှိခိုးကန်တော့နိုင်သည်။)
ကန်တော့ပါ၏ ။ ။ ၀န်ချတောင်းပန်ပါ၏၊ မြန်မာစကား၌ လူကြီးသူမများကို မတော်တဆ ထိခိုက်မိ တိုက်မိပါက " ကန်တော့ ကန်တော့ " ဟု တောင်းပန်စကား ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ရှိခိုးပါ၏ ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။
ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့် ။ ။ ကန်တော့ရသော ကုသိုလ်ကံစေတနာကြောင့် ဟု ဆိုလိုသည်။
အပါယ်လေးပါး ။ ။ အပါယ=(အပ+အယ။ အယ=ချမ်းသာ+အပ=ကင်းခြင်း) ချမ်းသာကင်းသောအရပ်၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရသော ဖော်ပြပါ အရပ်ဌာန ၄ခုကို အပါယ်ဟုခေါ်သည်။
ငရဲ=ငရဲထိန်း၊ ငရဲမီး စသည်တို့ဖြင့် အမြဲ နှိပ်စက်ခံရသော ဘုံဌာန၊ တိရစ္ဆာန်=မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်တရားတော်နှင့် ဖီလာကန့်လန့် ဖြစ်နေသော သတ္တ၀ါတို့၏ ဘုံဌာန ပြိတ္တာ=စားရမဲ့ ၀တ်ရမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေသူတို့၏ ဘုံဌာန အသူရကာယ်=ပြိတ္တာများထက် အခြေအနေဆိုး၍ အမြဲပူလောင် ဆင်းရဲ ခံနေရသူများ၏ ဘုံဌာန
ကပ်သုံးပါး ။ ။ ကပ္ပ=ကပ်=တစ်ခုသော အချိန်ကာလခေတ်၊ ဆိုးရွားသော ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ချိန်ကာလကို ကပ်ဟုခေါ်သည်။ ကပ်သုံးပါးမှာ-
ဒု ဗ္ဘိ က္ခ န္တရကပ်=ငတ်မွတ်ခြင်းဘေးဆိုက်ရောက်နေသည့်ခေတ်ကာလ (ကြီးကျယ်သော ငတ်မွတ်ခြင်းဘေးကို - မဟာသရောကြီး - ဟုခေါ်သည်။) လူသားအများလောဘထူပြောလျှင် ယင်းကပ်ဆိုက်တတ်သည်။ သတ္တ န္တရကပ်=လက်နက်ဘေး (သို့) စစ်ဘေး အန္တရာယ် ဆိုက်ရောက်သည့်ခေတ်ကာလ လူသားအများဒေါသထူပြောလျှင် ယင်းကပ်ဆိုက်တတ်သည်။ ရောဂန္တရကပ်= ကူးစက်ရောဂါ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုက်ရောက်သည့်ခေတ်ကာလ လူသားအများ မောဟထူပြောလျှင် ယင်းကပ်ဆိုက်တတ်သည်။
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး ။ ။ ယင်းအရပ်ဌာနများ၌ ဖြစ်လာသူများသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဒေသနာတောင်ကို နာကြားခွင့် မ၇ခြင်း၊ နာကြားရသော်လည်း အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိနိုင်စွမ်း မ၇ှိခြင်းကြောင့် ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး ဟုခေါ်သည်။
ငရဲ၊တိရ စ္ဆာန်၊ပြိတ္တာ လွန်စွာ အသက်တမ်း၇ှည်သော အရူပဗြဟ္မာနှင့် အသညာသတ်ဗြဟ္မာ၊ ( အရူပဗြဟ္မာ=ရုပ်မရှိ၊နာမ်တရားသက်သက်သာရှိသည်။ အသညာသတ်ဗြဟ္မာ=နာမ်တရားမရှိ၊ ရုပ်သက်သက်သာ၇ှိသည်။) ပစ္စ န္တရစ်အရပ်သား=တိုင်းစွန်ပြည်ဖျား လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်ခက်ခဲ၍ ဝေါဟာရ မပြည့်စုံ မကြွယ်ဝသည့် လူရိုင်းအမျိုးအနွယ်။ မိစ္ဆာဒိဌိ=မှားယွင်းသော အယူဝါဒရှိသော အမျိုးအနွယ် ဒုပ္ပည=အသိညာဏ်လူစဉ်မမီသူ သာသနာပ ကာလ
ရန်သူမျိုးငါးပါး၊ ။ ။ရန်သူ ဝေရ။ ရန်၊ ရန်သူ။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့သည် ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းတိုင်း ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ ကင်းဝေးအောင် ဆုတောင်းလေ့ရှိကြသည်။ ယင်းရန်သူမျိုးငါးပါးမှာ-
ရေ၊ မီး၊ မင်းဆိုး၊ ခိုးသူ၊ အမွေခံသားဆိုး၊ သမီးဆိုး တို့ဖြစ်သည်။
၀ိပတ္တိတရားလေးပါး။ ။ ၀ိပတ္တိ။ မပြည့်စုံခြင်း၊ ချို့တဲ့ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းသည့်အခါ ၀ိပတ္တိတရားလေးပါးမှ ကင်းလွတ်ငြိမ်းအောင် ထည့်၍ဆုတောင်းလေ့ရှိကြသည်။
1. မင်းဆိုး မင်းယုတ်အုပ်စိုးသော ကာလ၌ဖြစ်ခြင်း၊
2. အပါယ်လေးပါး၌ ဖြစ်ရခြင်း၊
3. ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ ချို့တဲ့ခြင်း၊
4. အသိအလိမ္မာ ညာဏ်ပညာနှင့် သတိဝီရိယ မ၇ှိခြင်း။
ဗျသနတရားငါးပါး။ ။ ဗျသန။ ပျက်စီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း။ ဗျသနတရား ငါးပါးရှိသည်။
1. ဉာတိဗျသန - ဆွေမျိုးများ ပျက်စီးခြင်း၊
2. ဘောဂဗျသန - စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျက်စီးခြင်း၊
3. ရောဂဗျသန - အနာရောဂါဖြစ်၍ ပျက်စီးခြင်း၊
4. ဒိဋ္ဌိဗျသန - အယူမှား၍ ပျက်စီးခြင်း၊
5. သီလဗျသန - သီလ ပျက်စီးခြင်း။
မဂ်တရား ။ ။ မဂ်တရားလေးပါး- လောဘစသော ကိလေသာတို့ကို ပယ်သတ်၍ နိဗ္ဗာန်သို့သွားရောက်ကြောင်းဖြစ်သော တ၇ားလမ်းကို မဂ်ဟုခေါ်သည်။
ဖိုလ်တရား ။ ။ မဂ်၏ တိုက်ရိုက် အကျိုးတရားကို ဖိုလ် ဟုခေါ်ပါသည်။ ဖိုလ်တရားလေးပါး-
နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ် ။ ။ ဒုက္ခခပ်သိမ်းတို့၏ ကုန်ဆုံးရာ အေးငြိမ်းချမ်းသာသော ဓါတ်သဘောကို နိဗ္ဗာန် ဟုခေါ်ပါသည်။ ရာဂ၏ ကုန်၇ာ၊ ဒေါသ၏ ကုန်ရာ၊ မောဟ၏ ကုန်ရာ သည် နိဗ္ဗာန်မည်၏။
မျှဝေရန်..မိတ်ဆွေထံသို့ Tweet Facebook
ဘုရားရှိခိုးရန်နေရာဌာန သို့အဖွဲ့ဝင်ပြီးမှ မှတ်ချက်များကိုရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
အောင်ဝင်းမြင့် သည်ှဧပြီ 27, 2015 က 11:45pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
အောင်ဝင်းမြင့် သည်ှဧပြီ 27, 2015 က 11:40pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။
ကျန်တော်သည်သေရေသရက်ကိုသောက်သောလူငယ်ဖြစ်ပေသည် သိုသော်ရတနာငါးပါးအားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှစ်ခိုးပြီးမှအိတ်ရာဝင်ခဲ့ပါသည်။ကျန်တော်နှင့်စကါးအခြေတင်လေးပြောပရစေတရားပွဲတရားစခန်းသွားနေကြသူငယ်ချင်းနဲ့ ပါတစ်နေ့ အသိတစ်ရောက်ရဲ့ ခလေးမွေးနေ့ မှကျန်တော်အပေါင်းသင်းတွေနဲ့ ......နဲ့ နဲ့ သောက်ခဲ့ပါတယ် ဖြစ်ခြင်တော့ သူငယ်ချင်းကတရားပွဲကလမ်းခေါ်တာပေါ့ ကျန်တော်ပြောလိုတ်သေးတယ် တရားဝင်မနာတော့ဘူးရေချိူးပြီးဘုရားရှစ်ခိုးပြီးအိတ်တော့မယ်ပြောလိုတ်တော့နေ့တိုင်းဘုရားရှစ်ခိုးနေတာပဲငမူးကဒါတော့သိသားပြောလိုတ်တယ်ကျန်တော်လွန်သွားသလား နေတိုင်းဘုရားရှစ်ခိုးနေတဲ့သြကာသကန့်တော့ခန်းရှင်းလင်းချတ်တစ်ခုခြင်းရှင်းပြရင်တရားဝင်နာမယ်ပြောတော့မေးတဲ့ အပါယ်လေပါးကစတာပေါ့ကတ်သုံးပါးလည်းပါတယ်ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးကေါ်မေးတယ်ရန်သူမျိုးငါးပါးဝိပါတ်တိတရားအစဗျသနတရာငါးပါးအစုံပေါ့ အခုထိုင်နေတဲ့ဂေါပကတွေထဲတစ်ရောက်လောက်ဖြေပေးပါဒါဆိုရပြီဆိုတော့ တစ်ရောက်မှအဖြေမထွတ်ခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ စိတ်ပေါတ်ပေါတ်နဲ့ ပြောလိုတ်တယ်မြင်းစီးလိုအထီးလားအမလားမသိတဲသူငယ်ချင်း ကျန်တော်တစ်ခုချင်းရှင်းပြပေးတော့ နားလည်သဘောပေါတ်ပြီးကျန်တော်ကိုနေရာပေးပါတယ်သူတို့တွေပြောပြဘို့ ကျန်တော်သေရေမသောက်ဖ်ြတော့ပါဘူး